အဆိုပါ Real-time Air ကိုအရည်အသွေးဒေတာတင်နေစဉ်စောင့်ဆိုင်းပေးပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကမ္ဘာ့ဖလား Air ကိုအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းစီမံကိန်းကြောင့်သင်တို့ဆီသို့ယူဆောင်နေပါတယ်
အထက်ဖော်ပြပါမြေပုံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လေထုတိုင်းတာရေးစခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် မှ အချိန်နှင့်တ‌ပြေးညီ တိုင်းတာ၍ရရှိလာသော လေထုအရည်အသွေးကိုပြသထားသည်။
ဝေမျှမယ်: လေထုယနေ့ဘယ်လိုညစ်ညမ်းပါသလဲ ကျော်ကိုနိုင်ငံပေါင်း 80 အဘို့, Real-time လေထုညစ်ညမ်းမှုမြေပုံထုတ်စစ်ဆေးပါ။
ဒီက web application ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
ကောင်းသော အထိခိုက်မခံအုပ်စုများအတွက်မကျန်းမာ အလွန်မကျန်းမာ
မနည်းမများသော မကျန်းမာတတ်သော အန္တရာယ်ရှိသော
Air ကိုအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း (AQI) တွက်ချက်မှု
အဆိုပါလေကြောင်းအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းမှုန်ကိစ္စ (PM2.5 အများနှင့် PM10 အ) ၏တိုင်းတာခြင်း, အိုဇုန်း (O3), နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (NO2), ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုက် (SO2) နှင့်ကာဗွန်မိုနော့ဆိုက် (CO) ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ မြေပုံပေါ်တွင်ဘူတာအများစုဟာ PM2.5 အများနှင့် PM10 အဒေတာနှစ်ဦးစလုံးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သာ PM10 အရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအနည်းငယ်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။
မှတ်တမ်းများအားလုံးသည် နာရီအလိုက်မှတ်တမ်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၈နာရီတွင်ထုတ်ပြန်ထားသောစာရင်းဆိုသည်မှာ ၇နာရီမှ၈နာရီအတွင်း တိုင်းတာမှုများဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာခဏမေးမေးခှနျး (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ) စာမျက်နှာစစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါ Contact စာမျက်နှာတွင်စစ်ဆေးပါ။
programatic API ကိုတဆင့်လေကြောင်းအရည်အသွေး data တွေကိုရယူလိုပါသလား?
အဆိုပါ GAIA လေထုအရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများအရှိဆုံးအန္တရာယ်ရှိသောလေထုညစ်ညမ်းတဦးဖြစ်သည့်ကို real-time PM2.5 အညစ်ညမ်းမှုအတွက်တိုင်းတာရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလေဆာရောင်ခြည်အမှုန်အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု. ရသည်။
ကို set up ရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, သူတို့ကသာ WIFI access point နှင့် USB power supply လိုအပ်သည်။ ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပုံပေါ်တွင်ချက်ချင်းနှင့် Real-time အစီရင်ခံကြသည်
သင့်ကိုယ်ပိုင် GAIA အရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဘူတာရုံယခုရယူပါ!
အထက်ပါမြေပုံထဲမှာ Real-time ညစ်ညမ်းမှုအညွှန်းထည့်နေပုံကိုအတှကျအသုံးပွုအဆိုပါ AQI စကေးပုံသေနည်းသတင်းပို့သည့်လက်ငင်း Cast ကိုသုံးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်အမေရိကန်က EPA စံအပေါ်အခြေခံသည်။
IQA ကျန်းမာရေး အကျိုးသက်ရောက်မှုများ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်
0 - 50 ကောင်းသော လေထုညစ်ညမ်းမှု မရှိသလောက်နည်းပါးပြီး လေထုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမ
50 - 100 မနည်းမများသော လေထု အရည်အသွေးကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိ၏။ သို့သော် အချို့သောအကြောင်းကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိသူများအတွက် ကျန်းမာရေးအနည်းငယ် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်တက်ကြွစွာကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူလူ, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်ပတွင်ခေတ္တခဏကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
100 - 150 အထိခိုက်မခံအုပ်စုများအတွက်မကျန်းမာ ထိခိုက်လွယ်သူများ ကျန်မာရေးထိခိုက်နိုင်သည်။ သာမာန်ပြည်သူများ မထိခိုက်နိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်တက်ကြွစွာကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူလူ, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်ပတွင်ခေတ္တခဏကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
150 - 200 မကျန်းမာတတ်သော မည်သူမဆိုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများစတင်ခံစားရနိုင်သည်။ ထိခိုက်လွယ်သူများတွင် ပိုအဖြစ်များနိုင်သည်။ Active ကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ, နှင့်အတူလူ, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်ပတွင်ခေတ္တခဏရှောင်ရှားသင့်သည်, အခြားလူတိုင်းအတွက်, အထူးသဖြင့်ကလေးများ, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်ပတွင်ခေတ္တခဏကန့်သတ်သင့်ပါတယ်
200 - 300 အလွန်မကျန်းမာ အရေးပေါ်အခြေအနေများကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ။ တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေထိခိုက်ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်။ Active ကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ, နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့, ပြင်ပခေတ္တခဏရှောင်ရှားသင့်သည်, အခြားလူတိုင်းအတွက်, အထူးသဖြင့်ကလေးများ, ပြင်ပခေတ္တခဏကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
300 - 500 အန္တရာယ်ရှိသော ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်၊ မည်သူမဆို ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းအားလုံးပြင်ပခေတ္တခဏရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလုပ်သာသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်သောကျေးဇူးတင်စကားဖန်ဆင်းထားသည်အဖြစ်အားလုံးသည်ခရက်ဒစ်, အ worlwide EPA သည် (Enviromental ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီများ) ကိုသွားရပေမည်။ အပြည့်အဝကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက EPA စာရင်းစာမျက်နှာစစ်ဆေးပါ။